Cajal: Qalabka Qaadashada Shabakada Awoodda leh si looga saaro Xogta
loo sameeyey si loo soo saaro macluumaad faa'iido leh oo laga helo goobo kala duwan iyo blogs.
Qodobadani, waxaanu dooneynaa inaanu soo bandhigno qalabka korontada 10ka ee kor u kaca weligiis:
Import.io waxaa loo yaqaanaa tiknoolajiyad casri ah waxayna aad u fiican tahay barnaamijka iyo kuwa aan barnaamijka ahayn. Qalabkani wuxuu leeyahay dataset u gaar ah oo kuu fududeynaya inaad galiso boggaga internetka ee kala duwan una dhoofiya CSV. Boqolaal kun oo bogag ah ayaa la burburin karaa iyada oo aan lahayn qalabkan, oo uma baahnid inaad qorto koodhka, dhisto 1000 API iyo sameyso hawlo kale oo adag sida Import.io waxkasta ayey kuu qabataa. Qalabkani wuxuu u fiican yahay Mac OS X, Linux, iyo Windows waxayna ka caawisaa soo dejinta iyo soo saarida xogta iyo faylasha la isku duubo internetka.
Dexi.io, oo sidoo kale loo yaqaano CloudScrape, wuxuu ina siinayaa fursado badan oo la xoqdo. Waxay ka caawisaa xoqidda iyo xawaarida xawaaraha xogta ka timid goob kasta iyadoon soo dejinin. Waxay soo saari kartaa xogta waqtiga-dhabta ah, waxaadna u dhoofi kartaa JSON, CSV ama keydiso Google Drive iyo Box.net.
Scrapinghub waa barnaamijka daruuriga ku salaysan ee kaa caawinaya soo saarista xogta iyadoon wax arrin ah la isticmaalin. Crawlera si ay u adeegsadaan shabakadaha internetka ee loo yaqaan 'bot' ayaa laga yaabaa inay si sahlan u bedelaan bogga intarnetka oo dhan si ay u noqdaan xog urursan, iyo qiimaha lacagta caymiska ayaa kuugu kici doona $ 25 bishiiba
Muuqaal Sawirle waa Macluumaadka shabakada caanka ah ee caanka ku ah oo kaa caawinaya in laga soo saaro xogta laga helo goobo kala duwan. Waxay u dhoofisaa xogta qaabab kala duwan sida XML, JSON, CSV, iyo SQL
ku-kordhin ah oo fududeynaya raadinta shabakadeena kala duwanaanshaheeda kala-soocida badan ta qaabab kala duwan.
Waji-doone ayaa loo yaqaan cilad-darrida xogta aan xadidnayn oo sahli karta sahamintaada internetka oo sahlan. Waxay soo dhejisaa xogtaada la soo saaro si loo sameeyo faafinta Google. Gawaarida dhabta ah waa runtii waa bilaash ah oo ka faa'iideysan kara bilowga iyo barnaamijyada khibradda leh. Haddii aad rabto inaad koobi ka sameyso xogta kuugu dhigto liiska, waa inaad isticmaashaa qalabkan.
Waa aalad xoog leh oo jilicsan oo loo adeegsado shabakad. Waxay si fudud u qeexi kartaa xogta aad adiga iyo ganacsigaaga u tahay mid faa'iido leh oo aan ahayn. Waxay ka caawisaa soo saarista iyo soo iibsato xog aad u tiro badan oo u fiican goobaha sida MailChimp iyo PayPal.
Spinn3r, waxaa suurtogal ah in xogta laga helo bogagga warbaahinta bulshada, blogyada gaarka ah, iyo wargeysyada. Waxaad ka heli kartaa iyaga oo ku keydsan qaabka JSON. Ka sokow ka-saaritaanka caadiga ah, qalabkan wuxuu bixiyaa difaac adag oo awood leh wuxuuna ka saaraa dhamaan qalabka waxyeellada leh iyo spamka mashiinkaada si joogto ah Source .